မည်သည့်လတွင်မဆို (၃ ၊ ၁၂ ၊၂၁ ၊ ၃၀) ရက် မွေးနေ့ရှင်များအတွက် တနှစ်တာ ဟောစာတမ်း – Alanzayar
(၃) ရက် ၊ (၁၂) ရက် ၊ (၂၁) ရက် ၊ (၃၀) ရက် မွေးဖွားသောမိတ်ဆွေများသည် ခရစ်သက္ကရာဇ်၂၀၂၂ ခုနှစ် မင်္ဂလာနှစ်သစ်တွင် …ကူညီမယ့်သူတွေထက် ဒုက္ခပေးမယ့်သူတွေနဲ့ပဲ ဆုံရတတ်ပါတယ်။ ရေနစ်တဲ့သူကို ဝါးကူထိုး ဆိုသလိုမျိုး ကူညီမလိုလိုနဲ့ ဒုက္ခပေးနေတတ်ပါတယ်။
လူလိမ်ခံရတာ၊မတော်မတရားပြောခံရတာ၊အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရတာ စတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး အန္တရယ်တွေ ကိုပါကြုံတွေ့ရတတ်။ရှိတာတွေ ဆုံးရှုံးလက်လွှတ်သွားရတဲ့ အဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်။
သူတစ်ပါးမကောင်းပြောတာ၊မတရားပြောတာ မျိုးတွေ ခံရတတ်။ ငွေကြေးဆုံးပါးတတ်။ ကျိန်းသေရမယ့်ငွေတွေ လွဲသွားတတ်တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ထားလုပ်ထား အကောင်းပြောမခံရတတ်။
ကံတရားက ကိုယ့်ဖက်မှာရှိမနေပါဘူး … ။ ဒါကြောင့် မိမိအလိုရှိတဲ့အရာများကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် ကိုယ်ပိုင်ဟန် နဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ၊ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေထုတ်ပြီး ဇွတ်အတင်းလုပ်ယူမှ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကို ဇွတ်လုပ်ယူပါ။
အလွန့်ကိုရန်များတဲ့ နှစ်ဖြစ်အံ့။သွေးထွက်သံယိုအထိဖြစ်တတ်။အပူလောင်တတ်တယ်။ ထိခိုက်မိတတ်။ရေ၊မြေ၊လေ၊မီး စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များလည်းကြုံရတတ်။မထင်မှတ်တဲ့ အနှောက်အယှက်တွေ၊အတိုက်အခံတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာ ၊စိတ်ရှုပ်စရာတွေ စတဲ့ ကံတရားကလွှတ်လိုက်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကြုံရတတ်။
ဒါကြောင့် အစစအရာရာ သတိထားပြီး ၊ မိမိအလိုရှိရာတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် ကိုယ်ပိုင်ဟန် နဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ၊ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေထုတ်ပြီး ၊ ပရိယာယ်သုံးပြီး ဇွတ်အတင်းလုပ်ယူပါလို့ တိုက်တွန်းအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး – ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေ ဖြစ်တတ် …။
သူများပြဿနာကြားဝင်ပါရတတ် …။ ရစရာပေးစရာငွေများကြန့်ကြန်နေတတ် … ။ အကြွေးတင်တတ် …။ ငွေအတွက် စိတ်ပူရတတ် …။ ငွေလိမ်ခံရတတ် …။ ငွေ မဝင်ခင်ကတည်းက ကုန်စရာတွေက စောင့်ကြိုနေအံ့ …။ ( မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိထားပြီး ၊ ယတြာတွေကိုလည်း ဖိချေပါ )
အချစ်ရေး – လူသုံးယောက်ဝင်နှောက်ယှက်တတ် …။ အဆင်မသင့်ရင် လမ်းခွဲ ပြတ်စဲရတတ် … ။ ချစ်သူ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းကိုလည်း ခံရတတ် … ။ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာတွေထက် စိတ်ပူ စိတ်ညစ်စရာတွေများနေရတတ် … ။ လူရင်းများ သစ္စာဖောက်တတ် … ။ သစ္စာရှိရှိ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ သတိထားဖြတ်သန်းသင့် … ။
အိမ်ထောင်ရေး – မတည်မငြိမ်ဖြစ်အံ့ …။ ဘေးလူဝင်ရှုပ်တတ် … ။ အနှောက်အယှက်အတိုက်အခံများအံ့ … ။ စိတ်တူကိုယ်တူ နားလည်မှုရှိရှိ သစ္စာရှိရှိနှင့် သတိကြီးစွာထားပြီး ကျော်ဖြတ်လျှင် အိမ်ထောင်ရေး သာယာလတ္တံ့ … ။
၁။ အိမ်နေရာထိုင်ခင်း ပြဿနာပေါ်တတ် ၂။ သားသမီး အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ် ၃။ ငွေကြေးကိစ္စများ မစွန့်စားသင့် ၄။ တောင်အရပ်သို့ ခရီးသွားရတတ် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးများလည်းပေါ်လာတတ် ၅။ ဘာသာရေးပစ္စည်းများ လက်ဆောင်ရရင်ထီထိုးပါ (စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ပူစရာတွေကြားမှ ထီဆုကြီးပေါက်တတ်)
၆။ အနီးကပ်ရန်သူများရှိနေအံ့ …။ ၇။ ခြေထောက် ခါး နာတတ် ၈။ နေရာထိုင်ခင်း ပြုပြင်ရတတ် အသစ်ရတတ် ။ အလုပ်အပြောင်းလဲ နေရာအပြောင်းလဲ ကြုံတတ် ၉။ ခြေရင်းဘက် နောက်ကျောဘက်တွင် မီးလန့်ရှော့ဖြစ် ကြုံတတ် သို့မဟုတ် လူတစ်ယောက် အပူလောင်ကြုံတတ် ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဝတ်ဟောင်း တစ်ထည်ကို စွန့်ပြီးထီထိုးပါ ဆယ်ပုံတစ်ပုံကို လှူပါမည်ဟု အဓိဌာန် ပြုပါ။
၁၀။ တွေ့နေမြင်နေကျ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု မတွေ့တော့လျှင် မုဆိုးမ တစ်ဦးကို ထီသွားထိုးခိုင်းပါ ထီပေါက်သလို ငွေရတတ်. ကျိုးပေးအဆောင် – ပတ္တမြား ၊ သံ ၊ အနီရောင် ၊ ကျောက်. အကျိုးပေးအရောင် – အနီရောင် ကြက်သွေးရောင်. သင့်တော်သည့် ဓါတ်စာ – ကြက်သွန်ဖြူ နီ ၊ ဂျင်း ၊ ငရုတ်ကောင်း. သတိထားသင့်သည့်အန္တရာယ် – မီး လျှပ်စစ် ပေါက်ကွဲမှု. သတိထားသင့်သည့် ရောဂါ – အဖျားကြီး ၊ ကူးစက်ရောဂါ. နေ့ကောင်း – အင်္ဂါ ၊ ကြာသပတေး ၊ သောကြာ။ ရက်သာ ( ထီဂဏန်း ) – ၃ ၊ ၁၂ ၊ ၂၁ ၊ ၃၀ ၊ ၆ ၊ ၁၅ ၊ ၂၄ ၊ ၉ ၊ ၁၈ ၊ ၂၇
အခိုက်အညံ့တွေပြေပျောက်ပြီး ကံတွေကောင်းသထက်ကောင်းစေဖို့အတွက်။ ။ ဂဏန်း ၊ ငှက် ၊ ငါး မကြာခဏ ဘေးမဲ့လွှတ်ပေးပါ … ။ လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ ခွေးလေခွေးလွင့်များကို မကြာခဏ အစာအာဟာရဒါနလုပ်ပေးပါ။ တိရိစ္ဆာန်ဂေဟာအတွက် မကြာခဏ အလှူအတန်းလုပ်ပေးပါ။
အထူးယတြာ။ ။ ကံတအားညံ့လျှင် မွေးမေ့ညဝတ်အိပ်ထားတဲ့ အဝတ်တစ်စုံကို နောက်နေ့မနက် ရေထဲမျှောပေးပါ …။ ငါ့မှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ ကံအခိုက်အညံ့တွေ ပါသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါ…။
မှတ်ချက်။ ။ စိုးရိမ် စိတ်ပူစရာမလိုပါ …။ ပေထားတဲ့ယတြာတွေကို မကြာခဏချေပေးခြင်းအားဖြင့် မကောင်းတဲ့ကံအညံ့တွေပြေပျောက်ပြီး ကံကောင်းခြင်းများ ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကို ရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်…။ Crd; ဆရာကြီးမင်းသိမ်းခိုင်အား လေးစားစွာဖြင့်Crd,,
Previous Article ထူးထူးဆန်းဆန်းသစ်ပင်ပေါ်တက်နေတဲ့ဆိတ်များနှင့် ၎င်းအဖြစ်အပျက် နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်များ
Next Article စစ်ကောင်စီက နေပြည်တော် မြို့နယ်အားလုံးကို လူ ၅ ဦးထက်ပိုမစုဖို့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်